UVladimir Yakovlevich Petruhin - isazi sesayensi esidumile Russian. It ngokukhethekile umlando nemivubukulo. Ubeke isihloko udokotela wesayensi zomlando. Ufundisa uMnyango umlando Russian Ephakathi futhi ezikhathini zakuqala wesimanjemanje zomlando Ezinqolobaneni Isikhungo Russian State University for the Humanities.
UVladimir Yakovlevich Petruhin Ngazalelwa eMoscow, edolobheni Pushkino, 1950. emfundweni yesibili esikoleni №1 e efanayo edolobheni elincane elinabantu abantu abayizinkulungwane 100.
Ngisho esikoleni ngaba nothando umlando nemivubukulo ngokukhethekile. Eminyakeni 12, waba ilungu club abavubukuli nezinsizwa ezazisebenza eMoscow ngesikhathi eMoscow Museum of History kanye neKwakha kaBusha, wadala ngasekupheleni XIX leminyaka.
Petruhin esikoleni uVladimir Y. kokuqeda nge nayo lendondo yesiliva. Baby Craze kunqunywa umsebenzi wakhe esikhathini esizayo. Ukuze semfundo ephakeme, ithunyelwa ubuhlakani komlando eMoscow State University.
MSU Petruhin uVladimir Yakovlevich lathweswa iziqu ngo-1972. Ngathola okukhethekile mlando ngolwazi olunye ulimi futhi nelungelo lokufundisa esikoleni. Kodwa le nsizwa wayenezinye izinhlelo.
Wathola umfundi postgraduate eMnyangweni Archaeology of the Moscow State University. Ngesikhathi zobuciko Russia medieval lasendulo abanesifiso kuye abaningi. раненных учебников по археологии, которые использовались во всех вузах страны. Ngesikhathi uMnyango ukuthi ayeqondiswa uSolwazi Daniel Antonovich Avdusin, umlobi yokudlanga zokufunda kakhulu emivubukulweni, ayesetshenziselwa zonke amanyuvesi yezwe.
Ngo Avdusin uVladimir Petrukhin uvikela mqondo yakhe. Isihloko nocwaningo lwakhe - ku emasikweni emingcwabo zaseScandinavia yobuqaba. Wathola degree of wabaholi wesayensi zomlando.
Ngo-1975, uVladimir Yakovlevich Petruhin kuholela hlobo Archaeology and Ethnography yendlu ukushicilela "Encyclopedia namaSoviet", ukwenza kokubili ukukhululwa edumile "Great Soviet Encyclopedia esichaza", nokulungiselelwa izichazamazwi imikhakha kanye thematic nama-encyclopedia. Petruhin lengamela umsebenzi elihlobene ne umlando ERussia yasendulo futhi ephakathi eScandinavia.
Ngo-1991 waba uprofesa e-Graduate School of the Humanities Dubnov, ngaleso sikhathi ubizwa ngokuthi "Jewish University eMoscow." Simon Dubnov, egama layo linguJehova wezemfundo - omunye wabasunguli be- umlando abantu bamaJuda. ukunakwa Omkhulu ekutadisheni abantu futhi wanika Petruhin uVladimir Yakovlevich. Umlando wamaJuda - yezindawo izidingo zakhe.
Ngesikhathi esifanayo, uya ukusebenza e-Institute for Slavic Ucwaningo we-Russian Academy of Sciences. Ngisebenza ke kuze kube manje.
Ngo-1994 Petruhin wathola isihloko Doctor of zomlando Sciences. Mqondo wavikela e-Institute of Slavic futhi Izifundo Balkan we-Russian Academy of Sciences. Isihloko nocwaningo lwakhe - izinkinga komlando namasiko we Slavic abantu eRussia ku IX - eminyaka XI.
Ngo parallel, iba ilungu Academic Council weSikhungo Scientific nabafundisi Jewish Studies "Sefer". Kuyinto inhlangano badalelwa ukuba afeze ucwaningo lwesayensi emkhakheni we-Studies lamaJuda futhi ekufundiseni izifundo Jewish ahlukahlukene emfundweni ephakeme. Ukugqugquzela izinto ezinjalo futhi Petruhin uVladimir Yakovlevich. Usosayensi ubuzwe kakhulu inquma izithakazelo zayo kanye nomsebenzi.
Kusukela ngo-1997 Petruhin lifundisa eMnyangweni umlando Russian ngesikhathi zomlando Ezinqolobaneni Isikhungo Russian State University zosizo. Ngo-2004, it ucubungula uquketheni Ministry of Education of the Russian Federation. Yena yanikezelwa ngezinga academic uProfesa Womlando Basendulo Ephakathi.
Imiklomelo kanye Imiklomelo
Phakathi nenkonzo yakhe yokuba zezemfundo Petruhin wathola ngokuphindaphindiwe imiklomelo ehlukahlukene imiklomelo. Ngakho, wathola i-diploma ye-fund "Open Society" ngo-1996. Le nhlangano kwemibuso zomphakathi yesihle eyasungulwa UMuphi uGeorge Soros. Petrukhina kokufaneleka zihlolwe ku "izincwadi omusha ngesayensi yezenhlalo kanye humanities izikole." Omunye imisebenzi yakhe emikhulu ngesikhathi kwaba wokulandisa "Ukuqala umlando Ethno-yamasiko eRussia IX-XI eminyaka" lapho wavikela ocwaningeni yakhe zobudokotela.
Ngo-2010 Petruhin ngithola indondo ngegalelo lakhe le Slavic Isikhwama kanye nokuthuthukiswa ifa umsunguli we-Slavic nezincwadi zokufunda uCyril noMethodius.
Ngo-2015 waba owawina indondo yaqanjwa academician Dmitry Likhachev umsebenzi eRussia ephakathi. Isikhathi cwaningo - IX-X leminyaka, kusukela ngafika eRussia Varangians ekukhetheni ukholo.
Kuze kube manje, Russian isayensi Petruhin - omunye ochwepheshe enkulu phezu Imivubukulo futhi anthropology komlando ERussia yasendulo futhi ephakathi. Nations, ukutadisha okuyinto njengoba esethembise umshado kwasekuqaleni, kuba lwamaSlav, Khazars futhi Scandinavians.
Futhi ekuqaleni izifundo zakhe yomlando Ethno-yamasiko eRussia kanye ukutadisha izici ethnographic izizwe abahlala Northern naseMpumalanga Yurophu. Ziyakwazi lwamaSlav, amaJuda Finno-Ugric abantu.
Isici esiyinhloko umsebenzi wakhe ngokwesayensi - indlela edidiyelayo ukumboza izinkinga. Petruhin uVladimir Yakovlevich, ogama izincwadi manje lafundvwako yibo bonke Ongoti umlando nemivubukulo Russia lasendulo, ngokuqinile uncika emsebenzini yayo kuyo yonke imithombo eyaziwa futhi iyatholakala.
Isibonelo esimangalisayo msebenzi - wokulandisa yakhe "Ukuqala umlando Ethno-yamasiko eRussia IX-XI eminyaka", eyakhululwa ngo-1995. Kulesi indatshana, yena kudala ukuba akhulelwe fresh umlando ERussia yasendulo, wasebenzisa indlela yamaRoma yokubusa okwenziwa ngokuyinhloko ezindabeni geopolitical futhi Ethno-kwamasiko. indlela enjalo bebengakaxoxi esetshenziswa abacwaningi.
Publications emaphephabhukwini esayensi
Petruhin - isazi kwande. Ifakiwe ezinhlwini ibhodi isihloko nedlanzana omagazini zesayensi kanye ezikhethekile, njalo livela emakhasini zabo izihloko kanye nocwaningo.
Jwayelana imisebenzi Petrukhina kungenzeka "Bulletin of the University YesiHeberu, elithi" "Izifundo Slavic", "Ukuphila Ezinsukwini ubudala," ezincwadini zonyaka ezazisakazeka "Ukufana", "Khazar lwencwadi".
Usosayensi liyingxenye amakomiti ukuhlela izingqungquthela Russian nasemazweni angaphandle emivubukulweni, umlando Russian futhi Khazar. Njalo uhlanganyela emihlanganweni abazinikele ethnography of Amazwe aseMpumalanga Yurophu.
UVladimir Petruhin - ngokuzimisela kakhulu zezinhlelo ezinkulu ezifuywayo international emivubukulweni, umlando kanye ethnography.
Ikakhulukazi, enye yezindawo ezinkulu kakhulu iyona "Khazar project". Inhloso Its main kuyisivikelo nokutadisha Khazar izikhumbuzo komlando namasiko, ukutadisha zobuciko osale Umlando wamaJuda. Le phrojekthi ayetshalwe Graduate School of Abantu kanye Jewish Russian Congress.
Esikhathini sazi esikoleni lifundisa umlando Russian ku endulo Ephakathi, efundisa izifundo isingeniso nemivubukulo. Esikhathini eMoscow State University e-Institute of Asia nase-Afrika ukunika izinkulumo "Khazars futhi umlando kokuqala amaJuda eMpumalanga Yurophu."
Russian State University for the Humanities Petruhin wafundisa ezifundo umlando eyinhloko Russian. Futhi ufundisa izifundo esikhethekile abafundi yezinto zakudala zenkolo, umlando lwamaSlav lasendulo. Minyaka yonke, phansi kobuholi bakhe kukhona bemivubukulo ucwaningo emkhakheni ezingxenyeni ezahlukene Russia, eYurophu nase-Asia.
UVladimir Petruhin - nombhali amaphepha isayensi kuka-500. Basuke eshicilelwe, kusukela ngo-1973 kuze kube namuhla. Futhi Wabhala eziningana izincwadi zesayensi ezidumile, okuyizinto interesting hhayi kuphela Ochwepheshe ewumngcingo kanye ezahlukene abafundi.
Phakathi kwabo incwadi "Russia Ephakathi." Petruhin uVladimir Yakovlevich it kanye Leonidom Belyaevym, umvubukuli esidumile isiRashiya, watadisha eMoscow lasendulo, ephakathi eYurophu naseMpumalanga. Lena incwadi umfundi jikelele mayelana nomlando Russia Ephakathi. Ihlanganisa inkathi Rus sidilizwa kusukela X kuya kweleshumi XIII futhi Muscovite eRussia ngekhulu XVII.
Enye incwadi yesayensi ethandwa - "Izinganekwane zaseScandinavia sidilizwa". Petruhin uVladimir Yakovlevich it 2012 ku AST ukushicilela indlu.
Ngesimo yakhe ethandwa uchaza isithombe emhlabeni, okwamanje emelwe amaqaba zaseScandinavia. Kungokufanayo kubonakala kithi imithombo wethu wakuqala - "Umdala Edda", milando, izinganekwane epics abantu zaseScandinavia.
Encwadini yakhe ethi Petruhin ligxile cwaningo kanye nokuhlaziywa izikhumbuzo ezobuciko lasendulo, kanye zenkolo, zatholwa abavubukuli kula mashumi eminyaka amuva.
UVladimir Petruhin Ngokutadisha ngokucophelela amasiko abantu German ngenkathi Ukufuduka Okukhulu, kanye Scandinavians nasenkathini Viking. Khona-ke, ngokuvumelana umbhali, isiko labo liye lihlotshaniswa isiko lwamaSlav abahlala eRussia. Yingakho eningi ukunakwa encwadini kunikezwa ukuqhathanisa futhi wafanisa izinganekwane we Scandinavians lasendulo nezizwe Slavic. Petruhin thola banayo kuningi abafana ngakho.
Omunye imisebenzi emikhulu Petrukhina - i-encyclopedia yesayensi "Slavic Antiquities: isichazamazwi Ethnolinguistic". 5 amavolumu yalo msebenzi yashicilelwa kusuka 1995 kuya 2012. Encyclopedia yanyatheliswa ngaphansi editorship jikelele Doctor of kolimi Nikita Ilyich UTolstoy. Petruhin kwaba labalobi ezimatasa.
Le ncwadi imininingwane isihloko Slavic Studies, isiko lwesiSlavic kanye izinganekwane.
Lokhu isichazamazwi lwenyusa wohlobo lokutadisha lwesiSlavic isiko, bakhuluma luphi ulimi, temdzabu izinganekwane ekhulwini elidlule leminyaka nesigamu. Ekuqaleni kwathiwa kucatshangwa ukuthi kuyoba kuphela yesayensi, kodwa kwaba ezahlukene ezithakazelisayo futhi ebanzi abafundi.
Kusukela le-encyclopedia singabona imininingwane kokuphila okungokomoya abantu Slavic. izihloko eziningana abazinikele imibono yabo mayelana oda zomhlaba, emvelo futhi izenzakalo of abangcwele isikhathi emhlabeni nabathakathi, abathakathi nezinye imimoya emibi.
Ngo yonke inkazimulo yayo ibonakala Rus sidilizwa. Petruhin uVladimir Yakovlevich unaka ngokukhethekile imikhuba, amaholide, amasiko kanye nokuphila komkhaya, eyamukelwa emindenini lwamaSlav lasendulo.
Petruhin futhi Zadornov
Izihloko ukuthi kuphakamisa emisebenzini yakhe uVladimir Petruhin, muva nje ethandwa kakhulu emphakathini Russian. Kuxoxisanwe hhayi kuphela, ngokulinganisa kososayensi, kodwa ngisho nosaziwayo.
satirist owaziwa Mikhail Zadornov muva alalelwa kakhulu emlandweni Slavic. Ngisho self-echazwe umcwaningi-non-academic umlando lwamaSlav. Ngesikhathi esifanayo iningi lososayensi libhekisela iziphetho yayo obusolisayo futhi engenangqondo.
Ngokwesibonelo, ngo-2012 Zadornov wakhulula ifilimu "Rurik. Lost Story". Izazi-mlando ezingochwepheshe abaye wagxeka isithombe isayensi-mbumbulu futhi populism. Le filimu ithobela imibono Zadornov antinormannskih, abaningi bacabanga ukuthi amateurish. Phakathi kwawo kwakunodade owayesuka i umlandeli oshisekayo kwemfundiso yokuziphendukela Norman - Petruhin uVladimir Yakovlevich. Zadornov wagxekwa kubo.
Ukubambelela tiyori Norman sekukhona ngesikhathi umsebenzi ifilimu "amaViking" Andrei Kravchuk. The main imidwebo zomlando Consultant - Petruhin uVladimir Yakovlevich. "AmaViking" - ifilimu ngomlando iRussia ngo X leminyaka. Kusekelwe imicimbi ezichazwe "Tale of esidlule Iminyaka", ikakhulukazi, kuphakame amandla Prince Vladimira Svyatoslavovicha.
Le filimu wadedelwa nasezindaweni zokubukela ibhayisikobho Russian ngosuku olwandulela entsha 2017 goda.On babe umcimbi uNdunankulu cinema kwi eside New Year amaholide. Ebhokisini isithombe eqoqwe ruble abangaphezu kwengxenye bhiliyoni. Nge isabelomali sika kwezigidi eziyinkulungwane 250 million angabhekwa yimpumelelo eziqondile.
Le filimu ngenkuthalo ikhangiswe zonke izindlela. abakhiqizi yakhe steel Konstantin Ernst futhi Anatoly Maximov.
Ngaphezu kwalokho Petrukhina, le nabenzi bamabhayisikobho kuboniswane onguchwepheshe anthroponimics Russian futhi sezilimi Fedor Borisovich Uspensky, umcwaningi ezinkulu lwamaSlav.
Inani labantu ecishe ibe yizinkulungwane ezintathu baqashwe lo msebenzi. Umsebenzi waqala ngo-2008.
Ukuze akunika nokwethenjelwa esiphezulu inhlolovo zomlando iqhutshwe Crimean ku Tayganskom kwesigubhu, a Genoese, e isiphetho School Simferopolskiy endaweni, futhi eCape Bahchisarae Phiolent e Sebastopol.
Ngokuba ifilimu ekhethekile Movie Ipaki edude Red Umgede eCrimea kwathiwa esakhele. Ngokwe-Abadali, lokhu kubukwa sihambisana esiphezulu ezichazwe isithombe izenzakalo.
Leonid Zhabotinsky: Biography nomlando impumelelo
Abantu abajwayele ukuvakasha kuyona Mineralnye Vody. Amahhotela Mineral Amanzi: incazelo, ukubuyekezwa
Ezizathwini eziningana, kungani ungacingi esibukweni lapho ukhala ucela
Izikhwama UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki njengendlela yokuzibeka
"Ruff" - cocktail ngoba umoya onamandla abantu
Indlela yokubala ngokunembile okuqukethwe kwekhalori kwesidlo ngezithako? Ukubala kwekhalori yokudla okulungele
Ukufakwa metal: amaphutha ekwakhiweni kophahla
Uneminyaka emingaki izingonyama bahlala? Sifunda!
Brick kocingo. Izinzuzo Ububi